Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambasady Malagasy ao Parisy : Korontanin-dRamandimbiarisoa Michou
Ambasady Malagasy ao Parisy : Korontanin-dRamandimbiarisoa Michou
Tonga tany Paris renivohitra ny firenena Frantsay tamin’ny faran’ny herinandro lasa iny ny vehivavy Malagasy iray izay mitonona fa mpanolotsain’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Nanomboka ny alatsinainy faha 11 febroary 2019 lasa teo dia tonga tao amin’ny trano ny ambasady ao Parisy ity ramatoa Michou ity ka avy hatrany dia nalainy avokoa ireo atontan-taratasy rehetra mahakasika ny fitantanana n Masoivoho Malagasy. Araka ny loharanom-baovao azonay dia ampihorohoroany ny mpiasa ao amin’ity toerana ity ankehitriny. Tsy misy nefa ny taratasy milaza ny asan’ity ramatoa ity mihitsy araka ny voalazan’ireo mpiasa any amin’ny ambasady ao Parisy fa ny maha mpanolotsaina an’i Andry Rajoelina filoham-pirenena azy no entiny manao izao zavatra izao, raha ny loharanom-baovao hatrany.
Tsy ny taratasy ihany no notadiavin’ity ramatoa ity fa hadihadiany avokoa ny mpiasa rehetra ao amin’ny foibe ity. “Iza no nandefa anao hiasa ato amin’ny ambasady ? Hoatrinona no karamanao ?” Misy no lazainy hoe be loatra izany karamanao izany ka mila soloina olona hafa ianao. “Miasa ve ny vadinao ary nahoana ianao no miasa ato amin’ny ambasady ato ?” Misy mihitsy aza no olona tezeran’ity ramatoa Michou ity hono raha toa ka tsy mahafapo azy ny valin-teniny. Anontaniany hatramin’ny fihaviany avy aty Madagasikara avokoa ny olona sasany ary rahonany hoe “raha mandainga dia avy hatrany dia hosoloiko”.
Tsy ny mpiasan’ny ambasady irery no notsidihan’ity mpanolotsain’ny filoham-pirenena ity ary anaovany fanadihadiana sy ampihorohoroany, hoy ny loharanom-baovao fa hatrany amin’ny toerana misy ny mpianatra any Cachan sy Arrago ary Général Foy. Anaovany fanadihadiana avokoa ny mpianatra sy ny mpiasa ao, ary savainy hatramin’ny tranon’izy ireo.
Tonga hatrany amin’ny mpiasa Malagasy ao amin’ny Unesco ao St Dénis ramatoa Ramandimbiarisoa Michou araka ny vaovao hatrany. Tsy vitan’ny teny fampihorohoroana hoy ny loharanom-baovao fa feno avonavona avokoa ny fihetsika ataony amin’izany.
Mihorohoro ny mpiasa Malagasy any Parisy amin’izao fotoana izao noho izany. Milaza ny hanao fivoriana moa izy ireo noho ity raharaha ity ka ho hitantsika eo ihany ny tohiny.
Mbola averinay hatrany ary efa navoakanay matetika teto amin’ny La Gazette de la Grande Ile fa misy ny tandapa ao akaikin’ingahy Andry Nirina Rajoelina ao no hanapotika azy fa indrindra ireo antsoina hoe “diaspora” izay hita fa tena mihatraketraka tokoa hatramin’ny nahazoan’ingahy Andry Rajoelina ny fitondrana izay.
Raha ampahatsiahivina ny raharaha mamoafady nataon’ireo tandapa manodidina an’i Andry Nirina Rajoelina ireo dia ny fomba nataon’izy ireo tamin’ny fanakanana ny mpanjaka 70 mahery nafarana avy any amin’ny faritany manerana an’i Madagasikara izay nasain’ny fanjakana ankehitriny sy ny filoha Andry Nirina Rajoelina hanome hasina sy hanatrika ny fametrahana azy amin’ny maha filohan’ny repoblika azy vaovao ny asabotsy faha 19 janoary 2019 lasa teo. Nohidian’ny tandapa ny vavahady teny Iavoloha rehefa tonga teny an-toerana ireo raiamandreny ara-drazana eto amin’ny firenena ireo araka ny baikon’ny tandapa ireo ihany ka najanona adiny roa tao an-tokotanin’ny Lapa tao Iavoloha tao. Nody tsy nanatrika ny lanonana ireo mpanjaka ireo noho izany. Koa satria isan’ny lehiben’ny mpikarakara tamin’izany ny vehivavy iray nantsoina hoe Michoue nangatahan’ny mpanjaka iray nalefa hanontany ny antony tsy nampidirana ireo mpanjaka ireo, dia teny anavonavona no nataon’ity ramatoa ity hoe “angaha ny mpanjaka izany ihany no karakarainay aty?” Teo anatrehan’izany dia niala moramora ilay Jeneraly avy amin’ny tafika niaraka tamin’io ampanjaka izay niresaka tamin’io ramatoa io. Menatra ilay jeneraly noho ny valitenin’ity ramatoa ity ka nialatsiny tamin’ilay ampanjaka.
Raha ny loharanom-baovao azonay dia ity ramatoa Michou ity izay nanao teny tsy voahevitra teny Iavoloha tamin’ny ampanjaka ireo ihany ity lasa any Parisy amin’izao fotoana izao ka miteraka savorovoro ao amin’ny Malagasy any an-toerana. Soa ihany fa noraisin’ny filohan’ny repoblika Andry Nirina Rajoelina manokana ireo ampanjaka ireo ny alahady faha 20 janoary 2019.
Ny loharanom-baovao haf azonay izao indray dia milaza fa voatendrin’ny minisitra ny Raharaham-bahiny ho “Première conseillère d’Ambassade” vaovao ao Parisy ity ramatoa Ramandimbiarisoa Michou ity. Handio io toerana io no isany nametrahana azy ao. Maro ny zavatra tsy mandeha ao noho ny gaboraraka nandritra ny taona maro ka tsy maintsy diovina noho izany. Lasa toerana fialokalofan’ny Malagasy tsy ara-dalàna any Parisy i Cachan, Arrago ary Général Foy. Tsy maintsy diovina hono ireo toerana ireo. Ity ramatoa nandroaka ampanjaka ity no hita fa hahavita izany ka dia io nalefa any Parisy io hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Tokony hataony araka ny fenitra takian’ny fitantanan-draharaham-panjakana izany fa tsy entiny amin’ny fanamparam-pahefana sy avonavona toa nataony tamin’ny mpanjaka ny faha 19 janoary 2019 teo.